အရည် Ring ကိုဖုန်စုပ်စက်
Rotary Vane ပန့်များ
Air Compressor ကို scroll လုပ်ပါ
Roots Vacuum Pump ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ။
အဆိုပါ roots vacuum pumps များမှာ positive displacement pumps is without contraction. Depending on the different working pressure range of roots vacuum pumps, it can be divided into two stages: Multistage roots vacuum pumps နှင့် Single-stage root vacuum pumps.
When multistage roots vacuum pumps are working, no fore pump is needed and they can function from atmospheric pressure. Whereadry atmosphere is essential, roots vacuum pumps လိုအပ်သည်။
အကွိမျမြားစှာ roots vacuum pumps have many advantages over the other လေဟာနယ်ပန့်များ andafew disadvantages.
အကွိမျမြားစှာ roots vacuum pumps are very compact and calm, enjoyalong-lasting service life, have no connection between moving parts.
သို့သော် Multistage roots vacuum pumps have some disadvantages like comparatively high atmospheric pressure. In addition, they can only achieveaslight pressure difference, which is the reason they are employed inamultistage structure where each progressive stage can build upon the pressure enhance achieve from the compression of the previous stage.
To know more about the အမြစ်များဖုန်စုပ်စက် get in touch China Vacuum Pump.
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုအရင်းအမြစ်များဖုန်စုပ်စက်များ၊ rotary vane စုပ်စက်၊ rotary piston pump, လက်စွပ်အရည်လေဟာနယ်စုပ်စက်၊ ရေနံလေဖိအား၊ ၀ င်စက် Compressor၊ Scroll Compressor ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ။
သုံး lobobe ဒေါင်လိုက်အမြစ်မှုတ်တံ
သုံး lobobe ဒေါင်လိုက်အမြစ်မှုတ်တံလုပ်ဆောင်ချက်စားပွဲ
သုံး lobobe အလျားလိုက် Roots Blower Functioning Table
Blower အထူးပူးတွဲပါ roots
Roots Blower Roots Blower (၃) ရင်း (Blower) ဆူညံသံအဆင့်
Roots Blower လျှောက်လွှာဥပမာ
မူရင်းပုံစံ VORTEX ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း
NEW VORTEX ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ)
တရုတ်နိုင်ငံရှိလေဟာနယ်ပန့်များနှင့်လေဖိအားထုတ်ကုန်များ၏ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများနှင့်တင်ပို့သူများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည် ဖုန်စုပ်စက်အမြစ်များ, rotary Vane စုပ်စက်, rotary ပစ္စတင်စုပ်စက်, အရည်လက်စွပ်လေဟာနယ်စုပ်စက်, ဝက်အူ compressor, scroll compressor, ရေနံ - အခမဲ့တွန်း, oilless တွန်း.
လိပ္စာ: အီတလီမှ Reggio Emilia၊
ကုန်ပစ္စည်း Catalog Update ကို
China Vacuum Pumps & Air Compressors မှစွမ်းအား။